Guudmarka Xaq u Yeelashada Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka - Carewell SEIU 503
Hel daryeelka aad u baahan tahay si aad u noolaato.
Dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee Carewell SEIU 503 waxay ka dhigaan qorshayaasha ceymiska gaarka ah kuwo ay awoodi karaan shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed ee Oregon kuwaas oo aan qaab kale ceymis ku heli karin. Tusalayaasha qaababka kale waxaa ka mid ah Oregon Health Plan, ceymiska loo-shaqeeyaha ama xaaska/seyga ee kale.
Dheeftan waxaa heli kara shaqaalaha daryeelka guriga iyo taageerada shaqsiyeed ee leh Medicare ama iska diiwaangeliyay ceymis la aqoonsan yahay iyaga oo ka haley Goob-suuqeedka ceymiska caafimaadka. Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka waxay dabartaa ilaa iyo $6,600 oo ah kharashyada jaabka laga bixiyo ee caafimaadkaee sheegashooyinka ay dabarto Medicare ama ceymiskaaga Goob-suuqeedka la ansixiyay ee 2022. Waxay sidoo kale dabartaa 100% kharashka khidmadaada ceymiska ee bil’laha ah ee ceymiskaaga Goob-suuqeedka gaarka ah, ama qayb ka mid ah khidmadahaaga Medicare.
Haddii aad xaq u leedahay Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka, waxaad heli doontaa Kaarka Dukaameysiga ee Dheefta (kaarka dukameysiga ee Mastercard) si aad ugu bixiso khidmadahaaga bil’laha ah (inaad Medicare leedahay ma ahane) iyo kharashyada caafimaadka jaabka laga bixiyo ee ceymiska leh. Kaarku waxa uu ka iman doonaa Ameriflex (Maamulaha Habboon ee Faa’iidooyinka).
Cusboobeysiinta macluumaadka dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee shaqaalaha taageerada
ee ka diiwaangashan Medicare ayaa laga heli karaa halkaan;
ee ka diiwaangashan ceymisyada Goob-suuqeedka ee la aqoonsan yahay ayaa laga heli karaa halkaan.
Dheeftan ayaa bixineysa khidmadaada bil’laha ee saafiga ah (tusaale, khidmadaada ka dib marka canshuuraha laga jaro) ee ceymisyada shaqsiyadeed ee xaqa leh ee laga iibsaday Goob-suuqeedka ama Medicare. Waxay sido kale ka dabartaa ilaa iyo $6,600 sanadka 2022 kharashyada caafimaadka ee jaabka laga bixiyo ee sheegashooyinka ay dabaraan ceymiskaaga gaarka ah ee la aqoonsan yahay ama Medicare. Dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee Carewell SEIU 503 ma ahan mid uu kafaalo qaado loo-shaqeeyaha ama ceymis kooxeed.
Si aad uga faa’iideysato dheeftan, waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaangeliso ceymiska la aqoonsan yahay ee Goob-suuqeedka Ceymiska Caafimaadka ama Medicare. Na soo wac — waxaan halkan u joognaa inaan kaa caawino inaan ku fahansiino hannaanka!
Xaaladaha badankood, waxaad u baahan tahay inaad sugto ilaa iyo Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka si aad isku diiwaangeliso. Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Goob-Suuqeedka federaalka waxay u dhaxaysaa Noofeembar 1, 2021 iyo Janaayo 15, caymiska 2022. Waxaa jira waxyaabo ka reeban oo xaq kuugu yeeli kara inaad iska diiwaangeliso Muddado Diiwaangelin oo Qaas ah. Arag Su’aalaha Inta Badan La Isweydiiyo si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Fadlan u akhri si taxadar leh shuruudaha xaq u yeelashada ee hoose.
Waxaa suuragal ah inaad xaq u yeelato dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka haddii aad:
Ka shaqeysay 40 saacadood ama ka badan bishiiba saacadaha shaqada xaqa leh — sidoo kale loo yaqaano saacadaha kooxda gorgortanka — labo bilood oo xiriir ah. Waxaa markaas jira hal bil oo sugitaan ah iyadoo saacadahaaga lagu soo wargelinayo Xafiiska Maamulka Dheefaha.
Macluumaadkaaga shaqsi ahaan ee aasaasiga ah hakaaga fayl gareysnaadaan Xafiiska Maamulka Dheefaha. Guji halkan si aad u cusbooneysiiso macluumaadkaaga haddadan.
Ku hel ceymiska caafimaadka Medicare ama ama ceymiska Goob-suuqeedka la aqoonsan yahay. Ka eeg FAQ wixii macluumaad dheeraad ah.
Tiradasaacadahashaqada xaqa leh ee aad u baahan tahay si aad xaq ugu yeelato dheefaha Carewell waa saacadaha shaqada ee ay bixiyaan Acumen, DHS ityo/ama PPL iyada oo matalayo macmiilkaaga.
Haddii ay ku moodo laba bilood oo xidhiidh ah adiga oo aan shaqayn saacado shaqo oo xaq leh (amahaddii soo sheegto saacadaha shaqada oo eber ah), ka dib muddo kordhin hal bil ah xaq uma sii lahaan doontid dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka. Si aad dib ugu hesho xaq u yeelashadaada dheefaha Carewell SEIU 503 waa inaad dhameystirto tallaabooyinka kore.
Muddo kordhinta Muddada Diiwaangelinta Sanadlaha ah ee Ceymiska Caafimaadka ee 2022
Haddii aad xaq u leedahay inaad hesho dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka bisha Oktoobar 2021, waxaad sii wadi doontaa inaad xaq u sii lahaato dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee Noofeembar 2021 iyo Diseembar 2021, iyada oo aan loo eegin saacadaha aad shaqeysay. Xaq lahaanshada sii socda ee ka dib Diseembar 31, 2021, waxaa lagu qiimayn doonaa iyada oo lagu saleynayo sharciyada xaq u yeelashada sida kor lagu qeexay.
Haddi aad qabto wax su’aalo ah oo ku saabsan xaq u yeelashadaada dheefaha Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka, fadlan wac lambarka 1-844-507-7554, dookha 3, dookha 2.
Ee loogu talagalay shaqaalaha xaqa u leh ee ay dabarto Medicare.
Wax badan ka baro Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee loogu talagalay shaqaalaha xaqa u leh ee ay dabarto Medicare.
Ee loogu talagalay shaqaalaha xaqa u leh ee leh ceymisyada la ansixiyay.
Wax badan ka baro Kaalmada Kharashka Daryeelka Caafimaadka ee loogu talagalay shaqaalaha xaqa u leh ee ka qaatay ceymisyada caafimaadka shaqsiyadeed ee la ansixiyay Goob-suuqeedyada Daryeelka Caafimaadka.